Shil dayuuradeed oo ka dhacay koonfurta Somalia (Xogta rakaabkii saarnaa) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Shil dayuuradeed oo ka dhacay koonfurta Somalia (Xogta rakaabkii saarnaa)
Shil dayuuradeed oo ka dhacay koonfurta Somalia (Xogta rakaabkii saarnaa)
(Hadalsame) 21 Luulyo 2021 – Waxaa shil ka dhacay garoon ku yaalla jihada koonfur galbeed ee Somalia, gaar ahaan Degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo.
Diyaarad siddey rakaab 45 ruux ah oo ka soo kicitantay magaalada Nairobi ayaa ka baxday dhabaha diyaaradaha (runway), markii ay ka degeysay garoonka diyaaradaha degmada Ceelwaaq ee gobalka Gedo, sida ay faafisay idaacadda Muqdisho.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Degmada Ceelwaaq ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay shilka diyaaradeed.
Dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda laga soo saaray iyaga oo bed qaba.
Wixii kasoo kordha waa idinla socodsiin doonnaa haddii uu Alle idmo.
Previous articleGadgaddoonka siyaasadda gilgilanaysa ee Itoobiya & go’aan xumada iyo gunnimada Soomaalida
Next articleShacabka Maraykanka oo hal sabab darteed uga horyimid duqaymaha dib uga bilaabmay Somalia